काठमाडौं– कागती पानी खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । चिकित्सकहरुले समेत विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या न्यून पार्न कागती पानी खान सल्लाह तथा परामर्श दिन्छन् । तर, कागती पानी खानु केही व्यक्तिहरुका लागि भने खतरा हुने गर्छ । स्वास्थ्यमा के कस्ता समस्या हुँदा कागती पानी नखाने ? यस विषयमा केही टिप्सः
कागती पानीले कफ र पित्त बढाउँछ । कफ र पित्तको समस्या भएको व्यक्तिले कफ र पित्त बढाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । कागती पानी पिउने बानीले आफ्नै शरीरलाई ठूलो समस्यामा पार्छ । स्वस्थ र व्यस्त रहन अत्यधिक कागती पानी पिउनबाट टाढा रहनुपर्छ । विशेषज्ञका अनुसार कागतीमा पाइने एसिड र मानव शरीरमा पाइने एसिड मिश्रण हुँदा अझै स्वास्थ्य बिग्रने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले अधिक मात्रामा कागती पानीको सेवन स्वास्थ्यका लागि खतरा बन्न सक्छ ।
Previous किड्नी सफाई देखि अनुहारमा निखार सम्म अनार खानुका १० फाइदा
Next नियमित काँचो प्याज खानुका १० फाइदा
Breaking news:कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन बारे आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना ! सबैले पढ्नैपर्ने !